Shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa shaqada ka eriday 593 shaqaale ah kadib markii ay diideen tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa shaqada ka eriday 593 shaqaale ah kadib markii ay diideen tallaalka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
United Airlines waxay ahayd markabkii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee ku soo roga waajibaadka tallaalka COVID-19 shaqaalaheeda horraantii Ogosto. Shirkadaha kale ee duulimaadyada ee Mareykanka ayaa aad ugu yaraa inay raacaan, laakiin waxay u dhaqaaqeen inay soo afjaraan ilaalinta mushaharka shaqaalaha aan la tallaalin ee laga helo fayraska.
67,000 oo shaqaale Maraykan ah oo ka tirsan United Airlines ayaa lagu amray inay bixiyaan caddaynta tallaalka ugu dambayn Isniintii la soo dhaafay.
United Airlines si kastaba ha ahaatee, waxay u oggolaan doontaa shaqaalaha inay shaqadooda sii wataan haddii la tallaalay laakiin ay ku guuldareysteen inay soo gudbiyaan caddeynta waqtiga kama dambaysta ah.
Shaqaalaha aan la tallaalin waxay haystaan ​​dhowr toddobaad oo hoos imanaya xeerarka ceyrinta hadda ee ururka si ay u tallaalaan haddii ay rabaan inay joogaan.
United Airlines waxay ku amartay 67,000 oo shaqaale Maraykan ah inay bixiyaan caddaynta tallaalka ugu dambayn Isniintii la soo dhaafay.
Hadda shaqaalaha shirkadda 593 ayaa wajahaya shaqo ka fadhiisis kadib markii ay u hoggaansami waayeen siyaasadda tallaalka ee COVID-19.
Madaxa kaniisadda Chicago Scott Kirby iyo madaxweynaha Brett Hart ayaa qoraal ay ku qoreen shaqaalaha ku yidhi: "Kani wuxuu ahaa go'aan aad u adag laakiin badbaadinta kooxdeena ayaa had iyo jeer ahmiyaddeena koowaad."
In kasta oo badankood United Airlines'shaqaalaha ayaa u hoggaansamay siyaasadda shirkadda, 593 shaqaale ayaa diiday in la jabiyo waxayna ku guuldareysteen inay codsadaan ka -dhaafitaanka sababo diimeed ama caafimaad oo ay shirkaddu ku qasabtay haddii ay dhacdo inay tallaal waayaan.
“Sababteenna aan ugu baahannay tallaalka dhammaan shaqaalaha United-ka ee United-ka ayaa ahaa mid fudud-si loo ilaaliyo dadkeenna nabadgelyada-runtuna waa tan: qof walba wuu ammaan badan yahay marka qof walba la tallaalo, iyo shuruudaha tallaalku way shaqeeyaan,” ayay United ku tiri qoraalka.
United Airlines si kastaba ha ahaatee, waxay u oggolaan doontaa shaqaalaha inay shaqadooda sii wataan haddii la tallaalay laakiin ay ku guuldareysteen inay soo gudbiyaan caddaynta waqtiga kama dambaysta ah, ama haddii la jeexjeexay ka hor inta aan go'aanka rasmiga ah ee xil ka qaadistu dhicin.
Taas macnaheedu waa shaqaalaha aan la tallaalin waxay haystaan ​​dhowr toddobaad ama xitaa bilooyin oo hoos yimaada xeerarka ceyrinta hadda ee ururka si ay u tallaalaan haddii ay rabaan inay joogaan.
United Airlines ayaa ku dhawaaqday horaantii bishaan inay shaqaalaha aan laga dhaafin waajibaadka tallaalka gelin doonto fasax lacag la’aan ah ama caafimaad laga bilaabo Oktoobar 2. Qorshaha ayaa markii dambe meesha laga saaray kadib markii dacwad ay soo gudbiyeen lix shaqaale ay racfaan ka qaateen go’aanka. Ilaa 2,000 oo shaqaale ah ayaa ilaa hadda codsaday in laga dhaafo.
United Airlines waxay ahayd markabkii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee ku soo roga waajibaadka tallaalka COVID-19 shaqaalaheeda horraantii Ogosto. Shirkadaha kale ee duulimaadyada ee Mareykanka ayaa aad ugu yaraa inay raacaan, laakiin waxay u dhaqaaqeen inay soo afjaraan ilaalinta mushaharka shaqaalaha aan la tallaalin ee laga helo fayraska. Georgia-ku-saleysan Delta Air Lines dharbaaxay $ 200 oo dheeraad ah oo caymis caafimaad ah bishii shaqaalaha aan la tallaalin.
Sida diyaarado kale oo badan, United waxaa si xun ugu dhacay xannibaadaha safarka ee masiibada ah, iyada oo ku qasbanaatay in ay shaqaaleysiiso ilaa 36,000 oo shaqaale ah markii ugu sarreysay dhibaatada sanadkii hore.